OTU ESI EME KA OKPUKPU OKPOKORO DI NA OKWU - OKWU - 2019
Ime ka okpokoro dị na Microsoft Okwu
Na saịtị anyị ị nwere ike ịchọta ọtụtụ isiokwu gbasara otu esi emepụta tebụl na MS Okwu na otu esi arụ ọrụ na ha. Anyị ji nwayọ na ịza ajụjụ kachasị ama, ma ugbu a ọ bụ oge azịza ọzọ. N'isiokwu a anyị ga-akọwa ụzọ isi mee ka okpokoro dị n'ihu na Okwu 2007 - 2016, yana Okwu 2003. Ee, ntụziaka dị n'okpuru ga-emetụta ụdị nsụgharị nke ngwaahịa Microsoft a.
Ihe omumu: Otu esi eme table na Okwu
Maka nmalite ọ bara uru na-ekwu na ajụjụ a nwere azịza zuru ezu - dị mfe na ntakịrị ihe mgbagwoju anya. Ya mere, ọ bụrụ naanị na ịchọrọ ịgbasa okpokoro ahụ, ya bụ, tinye mkpụrụ ndụ, ahịrị ma ọ bụ ogidi ya, ma nọgide na-ede ma tinye data n'ime ha, gụọ ihe ọmụma sitere na njikọ dị n'okpuru (na n'elu kwa). N'ime ha ị ga-achọta azịza nye ajụjụ gị.
Nkuzi na tebụl n'ime Okwu:
Esi tinye ụda na tebụl
Otu esi ejikọta mkpụrụ ndụ tebụl
Otu esi agbaji okpokoro
Ọ bụrụ na ọrụ gị bụ ịkepụta nnukwu tebụl, ya bụ, iji nyefe otu akụkụ nke ya na mpempe akwụkwọ nke abụọ, ma n'otu oge ahụ iji gosipụta n'ụzọ dị iche na ịga n'ihu na tebụl dị na peeji nke abụọ, ịkwesịrị ime ihe dị iche iche. Esi dee "Ịga n'ihu na tebụl" na Okwu, anyị ga-agwa n'okpuru ebe a.
Ya mere, anyị nwere tebụl dị n'ụdị abụọ. Kpọmkwem ebe ọ ga-amalite (na-aga n'ihu) na mpempe akwụkwọ nke abụọ na ịchọrọ ịgbakwunye aha ahụ "Ịga n'ihu na tebụl" ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ma ọ̄ bụ amaokwu nke na - egosi na nke a abụghị okpokoro ọhụrụ, kama ọ bụ n'ihu ya.
1. Tinye onye na-akpọ oku na cell ikpeazụ nke akara ikpeazụ nke akụkụ okpokoro nke dị na ibe mbụ. N'ihe atụ anyị, nke a ga-abụ nke ikpeazụ nke eriri ọnụ. 6.
2. Tinye mgbakwunye ibe na ebe a site na ịpị igodo. "Ctrl + Tinye".
Ihe omumu: Otu esi eme ka ibe gi daa na Okwu
3. A ga-agbakwunyere nkwụsịtụ nke ụlọ, 6 ahịrị nke tebụl na ihe nlereanya anyị ga-'akwali' na peeji na-esonụ, na mgbe 5-nke, ozugbo n'okpuru tebụl, ị nwere ike itinye ederede.
Rịba ama: Mgbe ị na-agbakwụnye nkwụsị nke akwụkwọ, ebe ntinye ederede ga-abụ na ibe mbụ, ma ozugbo ịmalite ide ihe, ọ ga-aga na peeji na-esonụ, n'elu akụkụ nke abụọ nke tebụl.
4. Dee ederede nke ga egosi na tebụl na peeji nke abụọ bụ n'ihu n'ihu nke ahụ na peeji gara aga. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gbanwee ederede ahụ.
Ihe omumu: Esi gbanwee font na Okwu
Nke a na - emechi, n'ihi na ugbu a ị maara otú e si eme ka tebụl mụbaa, nakwa otu esi aga n'ihu na tebụl na MS Word. Anyị na-achọ ka ị nwee ihe ịga nke ọma na ọ bụ naanị nsonaazụ dị mma na mmepe nke usoro ihe omume dị otú ahụ.